LXQt 0.16 mar horaba waa lasii daayay kuwani waa isbedelkiisa ugu muhiimsan | Laga soo bilaabo Linux
Horumarinta Deegaanka LXQt Desktop (oo ay soo saareen dhammaan kooxda horumarinta LXDE iyo mashaariicda Razor-Qt) ku dhawaaqay sii-deynta nooca cusub ee LXQt 0.16, taas oo horumar lagu sameeyay dalabyada deegaanka, iyo waliba ku darista 3 mowduuc oo cusub.
LXQt waxaa loo meeleeyaa sidii fudeyd, qaybsan, dhakhso iyo ku habboon sii wadis laga bilaabo horumarinta miisaska loo yaqaan 'Razor-qt' iyo 'LXDE desktops', kaas oo nuugay astaamaha ugu fiican labadaba.
Kuwa aan ka warqabin LXQt, waa inaad ogaataa tan waa jawi desktop furan oo furan oo furan oo loogu talagalay Linux, natiijada ku biirista mashruucyada u dhexeeya LXDE iyo Razor-qt iyo taas oo loo dhigay ikhtiyaar aad u fiican kooxaha kheyraadka yar ama kuwa doorbida inay keydiyaan ilos, maadaama horumarka ugu weyn ee LXQt uu yahay waxay bixisaa miis fudud oo ka fudud oo ka badan LXDE.
Maxaa ku cusub LXQt 0.16
Gudaha LXQt 0.16 waxoogaa horumar ah ku sameeyay maareeyaha faylka PCManFM-Qt iyo maktabadda LibFM-Qt ee aasaasiga ah, tan iyo ikhtiyaarro ayaa lagu daray si loogu beddelo tab cusub iyo tabs ka furmo daaqaddii u dambaysay. Kala soocida faylka ayaa laga dhigay mid dabiici ah iyadoo loo daaweeyo dhibic sidii xadeeyaha, kaas oo u dhigma dhaqanka GTK.
Lagu daray ikhtiyaarrada cusub si loo xareeyo wadahadal furan iyo isbeddelada qaabeynta waa la keydiyay. Waxaa lagu daray ikhtiyaar si aad ufurto tusaha kuxiran kumbuyuutarka maareeyaha faylka asalka ah, maahan kaliya PCManFM-Qt kudarey hadalkii "Araajida Hore" u ah lxqt-config-file-association configurator, kaas oo kuu ogolaanaya inaad xulato boggaga internetka ee caadiga ah, maareeyaha faylka, iyo macmiilka boostada (sidaas awgeed, qaabeynta iskuxirka feylka ayaa laga saaray kalfadhiga LXQt).
Sidoo kale, qaabkan cusub ee LXQt 0.16 hadda guddiga LXQt wuxuu awood u leeyahay inuu habeeyo isqarxinta otomaatiga ah ee tilmaameha xaaladda (ogeysiiska xaaladda). Waxaa lagu daray ikhtiyaar badhamada hawsha si aad ugu wareejiso daaqadaha shaashadda xigta.
Liiska ugu weyn ayaa leh amcontextual enú soo bandhigtay markii aad midig-gujiso. Qaab ayaa loo hirgeliyey si loo dhigo badhannada aan la isku-darin codsi dhinac dhinac ah.
Qayb ayaa lagu daray LXQt Power Management si loo habeeyo ficilada la qaadayo marka daminta, badhanka hurdada iyo heeganka la riixo.
Emulator-ka terminal-ka QTerminal wuxuu hirgeliyaa ikhtiyaarrada si loo furo tab cusub oo midigta midka hadda jira ka jira oo jooji tabinta markii badhanka dhexe la riixo.
Sawirka daawade LXImage-Qt wuxuu balaariyey tirada noocyada muuqaalka socon kara Awood lagu daray oo lagu qiyaaso sawirada. Badhanka lagu daray si aad ugu nuquliso dariiqa faylka sawirka.
Ee isbeddelada kale ee muuqda laga bilaabo LXQt 0.16:
Lagu daray awooda xulashada iyo habeynta golayaasha midabka ee qaabeeyaha muuqaalka lxqt-config.
Iskuxirka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee hagaagsan.
Maamulaha faylka LXQt Archiver ayaa loo qaabeeyey inuu furo waxyaalaha ku jira xirmooyinka RPM.
Laybareeriga libQtXdg wuxuu ku darayaa wicitaano si loo habeeyo loona qeexo bog furaha webka asalka ah, maareeyaha faylka, iyo macmiilka boostada.
Nidaamka si loo muujiyo ogeysiisyada, ikhtiyaar ayaa lagu daray si loo muujiyo ogeysiisyada shaashadda ku xigta tilmaamaha jiirka.
Mashiinka 'PulseAudio Volume Control' wuxuu xaliyaa dhibaatooyinka marka lagu xirayo qalabka maqalka ee leh isdhexgalka Bluetooth.
Saddex maqaar oo cusub ayaa lagu daray: Clearlooks, Leech, iyo Kvantum.
Isla mar ahaantaana, shaqadu way sii socotaa sii deynta LXQt 1.0.0, taas oo bixin doonta taageero buuxda si looga shaqeeyo Wayland.
Si aad u ogaato faahfaahin dheeraad ah ku saabsan sii deynta noocyadan cusub, waad iska hubin kartaa Xiriirka soo socda.
Ugu dambeyntii sWaxaan filayaa isku-dubbaridyada Ubuntu (LXQt waxaa lagu bixiyaa si toos ah Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA iyo ALT Linux, diyaar u yihiin saacado gudahood ama maalmo yar gudahood (waxay kuxirantahay qeybinta).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » LXQt 0.16 durba waa lasii daayay kuwana waa isbadaladiisa ugu muhiimsan
Google wuxuu shaaca ka qaaday cillad xagga amniga ah oo haysata GitHub